Shiinaha kuleeliyaha daawaha daawaha biibiile daawaha steel aan xuduud lahayn warshad stock biibiile iyo alaab | Hongyi
Pmagaca hage Waxyaabaha Heerka Faahfaahinta Codsiga
Daawaha biibiile 12Cr1MoVG
JISG3458-88 ∮8-1240 * 1-200 heerkulka sare, heerkulka hooseeya iyo iska caabbinta daxalka ee warshadaha kuleylka korontada ku shaqeeya
Dhuumaha heerkulka hooseeya 16MnDG, 10MnDG, 09DG
ASTM A333Grade 9
ASTM A333 ∮8-1240 * 1-200 45 ~ -195 heerkulka hoose ee tuubbada weelka cadaadiska hooseeya iyo tuubbada isweydaarsiga heerkulka hooseeya
Tuubo kuleeliyaha cadaadiska sareeyo 20G
DIN17175-79 ∮8-1240 * 1-200 beebka kuleylka, sanduuqa wax lagu ururiyo iyo tuubbada uumiga ee kululeeyaha cadaadiska sarreeya
hHa tuubo bacriminta cadaadiska sare
16Mn GB6479-2000 ∮8-1240 * 1-200 qalabka kiimikada iyo dhuumaha leh heerkulka shaqada ee -40--400 iyo cadaadiska shaqada ee 10-32mpa
Dhuumaha cadaadiska hooseeya
16Mn<Q345A.B.C.D.E> GB3087-2008 ∮8-1240 * 1-200 sameynta kuleeliyaha cadaadiska hooseeya iyo kuwa dhexdhexaadka ah
Biibiile gaarsiinta 10 #, 20 #
ASTM A53 ∮8-1240 * 1-200 Tubada birta guud ee aan xuduud lahayn ee ku habboon gudbinta dareeraha
Tuubada qaabdhismeedka guud 10 #, 20 #, 45 #, 27SiMn
ASTM A53 ∮8-1240 * 1-200 Lagu dabaqi karo qaabdhismeedka guud, mashiinada taageerada injineernimada, iwm
Tuubbada Daawaha waa nooc ka mid ah biibiile bir ah oo aan xuduud lahayn. Tuubada Daawaha waxaa loo qaybin karaa tuubbo aan xuduud lahayn oo loogu talagalay isticmaalka qaabdhismeedka iyo tuubada Daawada leh ee cadaadiska u adkeysata Ka duwan yahay heerka wax soo saarka iyo warshadaha tubooyinka daawaha ah, astaamaha farsamada ee tuubooyinka waxaa lagu badalaa lifaaq iyo xanaaq. Ku guuleysto shuruudaha ka baaraandegidda. Waxqabadkeedu wuu ka sarreeyaa kan guud ahaan birta birta ah ee aan xadka lahayn, halabuurka kiimikada ee tuubbada daawaha ku jirta wuxuu ka kooban yahay Cr oo badan, iska caabbinta heerkulka sare, iska caabbinta heerkulka hooseeya, caabbinta caabbinta. Sababta tuubada daawaha ah loogu adeegsado batroolka, aerospace, warshadaha kiimikada, awooda korontada, kululeeyaha, warshadaha milatariga iyo warshadaha kale ayaa ah in astaamaha farsamada ee tuubada daawaha ah ay sifiican isku badalaan oo ay sifiican ula qabsadaan
Tuubbada Daawaha waxaa badanaa loo isticmaalaa kuleylka dusha sare ee kululeeyaha cadaadiska hooseeya iyo midka dhexdhexaadka ah (cadaadiska shaqada guud ahaan kama badna 5.88mpa, heerkulka shaqada ayaa ka hooseeya 450 ℃); Waxaa loo adeegsaday kuleylinta tuubooyinka dusha sare, dhaqaaleyahanada, kululaystayaasha, dib u kululeeyayaasha iyo dhuumaha warshadaha kiimikada kiimikada ee kululeeyayaasha cadaadiska sare (cadaadiska shaqada guud ahaan wuxuu ka sarreeyaa 9.8mpa heerkulka shaqaduna wuxuu u dhexeeyaa 450 ℃ ~ 650 ℃).
Daawada birta ah ee daawaha ah waxaa badanaa loo isticmaalaa warshadda korontada, warshadda tamarta nukliyeerka, kululeeyaha cadaadiska sare, heerkulka sarreeya, dib u kululeeyaha iyo cadaadis kale oo sarreeya iyo dhuumaha heerkulka sarreeya iyo qalabka, waxaa laga sameeyaa bir kaarboon tayo sare leh, birta qaabdhismeedka daawaha ah iyo kuleylka aan caadiga ahayn- bir adkaysi leh, ka dib duubista kulul (xoqidda, ballaadhinta) ama rogista qabow (sawir).
Waxaa dib loo warshadeyn karaa 100%, iyadoo la waafajinayo istiraatiijiyadda qaran ee ilaalinta deegaanka, ilaalinta tamarta iyo ilaalinta kheyraadka. Siyaasadda qaranku waxay dhiirrigelineysaa ballaarinta berrinka dalabka ee tuubbada daawaha ee cadaadiska sare leh. Shiinaha, saamiga isticmaalka tuubbada daawaha ah ee wadarta guud ee birta ayaa ah kalabar oo keliya tan dalalka horumaray. Ballaarinta berrinka dalabka tuubbada daawaha waxay siisaa meel ballaadhan oo loogu talagalay horumarinta warshadaha. Sida ku xusan cilmi-baarista koox khabiir ah oo ka tirsan laanta biibiile daawaha ah ee Shiinaha Gaarka ah ee Ururka Isboortiga, baahida loo qabo tuubbada daawaha ee cadaadiska sare leh ee Shiinaha ayaa kordhin doonta 10- 12% sanadkiiba mustaqbalka.
Hore: Sax sare High qabow barbaro sax tuubo bir aan xuduud lahayn
Xiga: Liiska qiimaha birta kulul duuban ee qiimaha birta madow ee birta madow